7 Nooc Oo Haweenka Kamid Ah Oo Halis Gelin Kara Naftaada (Iska Ilaali) | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»7 Nooc Oo Haweenka Kamid Ah Oo Halis Gelin Kara Naftaada (Iska Ilaali)
Aayaha editor Send an email November 20, 2018
Waxa jira noocyo kamid ah haweenka oo haddii aad guursatid marnaba aadan nabad heli doonin isla markaana Qatar gelin doona naftooda.
Nolosha haweeneyda rabta in wax walba loo sameeya in wax allaale iyo wixii ay u baahato aad usameyisd haddii aad rabtid nabad. Dhibaato ayay kuu keeneysaa xittaa wax yarba allaha ka dhigee hadaad usameyn weyso.
Haweeneyda cabashada badan
Haweeneyda mar dhif ah qiimeyso waxaad usameyso, balse deg deg wax walba cabasho uga keenta waxa aadan sameyn waa nooc kale oo ay tahay inaad ka welweshid. Maskaxdaada nabad kuma heli doonto guur noocaas ah.
Naagta aanan marnaba qancin
Guursashada haweeney rabta wax kasta isla markaana aanan ku qanacsaneyn waxa ay heysato waxaa hubaal ah inay dhinac walbo kuu burburin doonto.
Tan lacagta ku ciyaarta
Xaaska wanaagsan waa maamule wanaagsan; waxay gurigaaga iyo dhaqaalahaaga u maamuli doontaa si wanaagsan, fudeed ayaa dareemi doontaa marka dhaqaalahaaga si wanaagsan loo maamulo. Xaaska xun waxay hoos u dhigi doontaa dhaqaalahaaga dhib malahan sida adag ee aad ku shaqeysay, ma arkeyso saameynta iyo culeyska shaqadaada adag.
5.Tan shukaansiga badan
Haweeneyda shukaansiga badan waligeed aamin ma noqoto. Waxay rabtaa inay dhadhmiso saaxiibkaa, dariskaaga iyo mid kasta. Kuma qanceyso hal nin.
Haweeneyda nafteeda bis ka fekerta
Haweeneyda teeda bis ka fekerta kuma daryeeleyso illaa baahideeda ay daboosho; waxa kaliya ee ay ka fekerto ayaa ah nafteeda waxbana kama gelin qof kale.
Haweeneyda xushmadda aanan lahayn
Haweeney aanan ku xushmeyn wa tan ugu xun waqti kasta marka xaqiiqda laga hadlo. Wayku illaaweysaa si xunna way kuula dhaqmeysaa dhib malahan waxaad u sameyso. Way ku liideysaa iyadoo dhulka kuugu tuureysa sidii cad calal ah oo kale.
Haweenka noocaan ah waa halis la noolaashahooda, inaad guntiga u xiratana waxay noqon kartaa adigoo diyaarsaday godkii lagugu duugi lahaa.
RAGGA: 6 Ammaan Oo Gacalisadaada Ay U Baahi Qabto
Gabay iyo Geeraar Jacayl oo aad u macaan (Akhriso)